Tag: internetka waxyaabaha | Martech Zone
Tag: internetka waxyaabaha
Tiknoolajiyada ka dambeysa bitcoin waxay u oggolaaneysaa macaamilada in loo fuliyo si kalsooni leh oo aamin ah, iyada oo aan loo baahnayn dhexdhexaadiye. Teknoolojiyadaani waxay ka baxeen sidii ficil ahaan loo iska indho tiri lahaa oo ay u noqdeen diiradda hal-abuurnimada bangiyada waaweyn. Khubaradu waxay qiyaaseen in adeegsiga teknoolojiyada xannibaadda ay macnaheedu noqon karto in la badbaadiyo 20,000 oo milyan oo doolar qaybta 2022. Qaarkoodna way sii socdaan oo waxay ku dhiirranayaan inay isbarbar dhigaan ikhtiraacadan iyo tan mishiinka uumiga.
Tirada qalabka ku xiran internetka ee ku jira gurigeyga iyo xafiiskeyga ayaa sii kordhaya bil kasta. Dhammaan walxaha aan hadda haysanno waxay leeyihiin ujeedo si caddaalad ah u muuqata - sida kontaroolada iftiinka, amarrada codka, iyo heerkulbeegyada barnaamijka lagu baran karo Si kastaba ha noqotee, sii socoshada yareynta tikniyoolajiyadda iyo isku xirnaantooda waxay keeneysaa carqaladeyn ganacsi sida aynaan waligeen horay u arag. Dhawaan, waxaa la ii diray nuqul ah Internetka Waxyaabaha: Digitize or Die: Beddel ururkaaga. Isku duub
Khamiista, Noofembar 16, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Amaahiyeyaashu waxay taageerayaan maalgelinta warshad tafaariiqeed oo markii horeba xanuunsatay. Bloomberg xitaa waxay saadaalineysaa in Tafaariiqda Tafaariiqda ay dhaqso noogu dhici karto. Warshadaha tafaariiqda ayaa u bakhtiyaya hal-abuurnimo, iyo Internetka Waxyaabaha kaliya ayaa laga yaabaa inay bixiyaan kobcinta loo baahan yahay. Xaqiiqdii, 72% tafaariiqleyda ayaa hadda ku howlan mashaariicda Enterprise Internet of Waxyaabaha (EIoT). Kala badh tafaariiqleyda ayaa durba ku daraya tikniyoolajiyadda u dhow suuqgeynta. Waa maxay EIoT? In shirkadaha maanta, sii kordhaya
Haddii aadan maqal, Amazon waxay furaysaa shabakad ballaaran oo dukaamo pop-up ah oo ku yaal suuqyada Mareykanka, iyadoo 21 dukaanno oo ku yaal 12 gobol ay horayba u furan yihiin. Awoodda tafaariiqda ayaa sii wadda inay soo jiidato macaamiisha. In kasta oo macaamiil badani ay ka faa'iideysanayaan heshiisyada khadka tooska ah, la kulma badeecad shaqsi ahaan weli miisaankeedu sarreeyo oo ay leeyihiin dadka wax iibsanaya. Xaqiiqdii 25% dadku waxay wax iibsadaan kadib baaris maxalli ah oo 18% ka mid ah lagu sameeyo 1 maalin gudahood Internetka ayaa is beddelay sida